トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "umtyholi", iqabane iimvakalelo?
"Diyavulosi" ka-3500 yen kwintsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa le "umtyholi" isikhundla umva ukufumana ezamahala yovavanyo indlela
ikhadi bhula, intliziyo yakho ehlanganiswa iimvakalelo, ezifana umnqweno nomona umntu limela akukho meko. Abantu Usenokuba maxa wambi enze into nobunzima ukubawa, ukuba ayikwazi ukuba loomntu ngokuzolileyo kuligweba imeko, oko isigqibo ukuba umphumo ilawulwa umqondo ukuba ukunyoluka nomona.
"umtyholi" yeyona ibonisa abekwe kwimeko enjalo. Ungaze, ayikho enye nechibi intsingiselo elungileyo, kodwa aninako ukuba iziphumo ezihle kakhulu kwakhona kwindawo reverse kwindawo echanekileyo, kuxhomekeke indlela deal kunokuba nako nijike iziphumo. Ukuba
iqela uziva indawo ezintle kwi "umtyholi" ibimele ukuba mean
"umtyholi" na ukuba bayaphuma kwindawo eqhelekileyo, inqondo ukuzola, kulawulwa kukubawa ithetha ukuba umele. Kukho izinto ezininzi zezi ukubawa, zange kakuhle akanqweneli nekhwele, ixhala, umona, ikratshi, isiphithiphithi iimvakalelo ezifana Jashin lwengqondo, kwanokuba oko uziva nje Sakibashi 'kuba bengasebenzi kungenzeka ukuba ube phezulu.
In uthando, ubone ukupasiswa zomdlali welinye iqela ukuba ukhathazekile, wayeza licinezelwe nxamnye iimvakalelo zam nje kumdlali welinye icala, umthwalo, okanye ndisuke aqhekekileyo kulwalamano lwabo, naye loo iimvakalelo zabo amaqabane Kukwakho amathuba okuba. Ekubeni kukho ithuba ephakamileyo amagama kunye nezenzo zabo ziya kude ngakumbi nangakumbi iimvakalelo zakhe, kwaye kungcono ukuyeka ukuba avume ukuba uthando lwakhe engamthandi. Ukuba
"umtyholi" Waphuma nge kwindawo entle, bezolile ukwamkela ukuba imeko akulunganga kakhulu, kubalulekile ukuba uyazi ngokungakhethe ukucinga malunga zinto. Ngenxa yokuba iimvakalelo zakhe bafuna kuni, kububulumko ukuba ulinde uzoqhubeka ukutshintsha lo gama kugcinwe kangangoko ukuba kunokwenzeka ibanga elithile.
of the "umtyholi" Ukuba uthandana qela
kwindawo umva Kucingelwa ukuba lithetha "umtyholi" Waphuma kwindawo umva, wazichasa ngokwakhe, nto leyo ibekwe nanini na imeko elungileyo, kwenziwa kwimeko apho anaerobic kubangele iveza oko kuthetha ukuba. , Le meko iya kuba saba nemiphumo emihle Kulo mzekelo, ukuba kunokwenzeka ukuze ulahle kude iminqweno kunye neminqweno yehlabathi, kodwa unako jikani okanye ukuphucula imeko, size sihlale kwimo yokuba eziqhutywa yi ukunyoluka.
ngothando, kuba iimvakalelo zakhe ayifanelekanga ukuba isetyenziselwe kuwe, kusenokuba yimfuneko ukuzama ukuze ulahle kude a iimvakalelo zothando enjalo kanye. My kuphela kwi ukuba icinezelwe nxamnye iimvakalelo umdlali oya kuziva kwelinye iqela umthwalo, uya kuba kwenziwa ngakumbi nangakumbi kude kuwe.
It ayisebenzi kwanokuba yintoni kweli xesha, kungenxa yokuba abo kumiselwa ukuhamba isiphelo enkulu ezingenako indawo wena, ngenxa yokuba yokunyoluka kunye neemvakalelo ukuba kuwushiya umzimba zize flow, le meko luyaphucuka ungalinda kuyo.